“အ လှူ တော် ဂု ဏ် ပြု မှတ် တမ်း တင် ခြင်း “
အလှူ မှတ် တမ်း တင် ဂုဏ် ပြု ခြင်း
မန်း သင်္ကြန် ပုံ ရိပ် များအမှတ် တစ် ( လှ လှ ပ ပ က က)
ကို ပေါက်လ က်ေ ဆာင် မြန်မာ ပြည် မှ အလှ တရားများ
Happy Myanmar New Year ( 1376)
မြန်မာ သနပ်ခါးလို့ အမည်ပေးပါ့ရစေ သဘောတူလားဟင်
ကြည်နူး ပျူ ငှာ၊စတုဒီသာ
ဒီပုတ်​ထဲက ပဲ ဘာပဲလဲမ​မေးနဲ့
ကိုယ်လျှောက်သော ခရောင်းလမ်း ( အပိုင်း ၆ )
မန်းသင်္ကြ န် အ ကြို နေ့ အ စ……………….
ကိုေ ပါက် လက် ဆောင် မြန် မာ ပြည်မှအ လှ တရားများ
- ဖြူစိုင်း လူ
လူ ဘောင် ကို စွန့် ခွာ သူ ဦး မာ ဃ
ကိုေ ပါက် က သ တင်း ပေး ခြင်း
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဧပြီ ၂၀၁၄
နွေ ဦး သင်္ကေ တ ငု ၀ါ အ လှ နဲ့ မန္တလေး မြို့ မ သ င်္ကေ တ ငွေ ငန်းေ မာင် အ လှ
မျက်လှည့် (သို့) မြင်းလှည့်
- Maung Tar Tee
Page 1 of 83112345...102030...>»
Comments By PostFalling In Love - Kaung Kin Pyar - Wowမသေလို့ ပြန်ရေး ပြနိုင်တဲ့ ..ကျနော့် ခရီးစဉ် - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - alinsett (gazette)အမျိုးသမီးနဲ့ .......................... - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - Wowမန်းသင်္ကြ န် အ ကြို နေ့ အ စ................... - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - alinsett (gazette)မန်း သင်္ကြန် ပုံ ရိပ် များအမှတ် တစ် ( လှ လှ ပ ပ က က) - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - Crystalline“ကျ မ ဆိုက် ကားသ မား ” - Kaung Kin Pyar - snow smileဂဇက်စာပေဆု ဘယ်သူရသွားလဲဆိုတော့. . .ဆိုတော့. . . - Wow - snow smileအပေါင်းနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ - aye.kk - aye.kkနတ်သမီးကဝေ - ဘဆွေ - alinsett (gazette)လူမြင် တဲ့........ပီတိ - lu lu - alinsett (gazette)ရှမ်းပြည်က သင်္ကြန်ရက်လေးများ - ကေဇီ - alinsett (gazette)၀ိုင်းစုရဲ့ စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုခဲ့မယ်ဆိုရင် - Char Too Lan - lu luဒီပုတ်​ထဲက ပဲ ဘာပဲလဲမ​မေးနဲ့ - alinsett (gazette) - aye.kkကြည်နူး ပျူ ငှာ၊စတုဒီသာ - alinsett (gazette) - TNA​မြေ​ခွေး - alinsett (gazette) - aye.kk၀င်​ကစွပ်​ - alinsett (gazette) - padonmar၁၃၇၆ နှစ်သစ်တွက် လက်ဆောင်-ဆင်ခြင်တတ်က အကျိုးရ - alinsett (gazette) - ကိုပေါက်(မန္တလေး)Happy Myanmar New Year ( 1376) - alinsett (gazette) - padonmarမြန်မာ သနပ်ခါးလို့ အမည်ပေးပါ့ရစေ သဘောတူလားဟင် - alinsett (gazette) - padonmarဂေါက်တယ်လို့မှတ်မှာလား(၅)-သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ရှည်/အလကားပေးမလား - alinsett (gazette) - Wowဘုရားနဲ့ အမျိုးတော်မတော်တော့ မသိဘူး….Devine Ancestry - alinsett (gazette) - aye.kkနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံ - snow smile - Crystallineစိတ်ဧ။် ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပါရစေ - Crystalline - ဦးဦးပါလေရာအိမ် - Mr. MarGa - lu luသရဲကပ်​​နေတဲ့ ကဗျာ - Mr. MarGa - ko sixအဖူးအငုံလေးတွေက ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား - alinsett (gazette) - padonmarမဟာရန်သူ အချစ်တော်ကြီး နဲ့ အလွဲများ - ကေဇီ - WowWestern Union	Category	Arts & Humanities
Top 10alinsett (95340 Kyats )Anzartone (86123 Kyats )Yin Nyine Nway (81300 Kyats )intro (77197 Kyats )MaMa (76613 Kyats )naywoonni (74969 Kyats )Khaing Zar Win (72305 Kyats )weiwei (71696 Kyats )SP (71488 Kyats )zaylay (67079 Kyats )	Tags2010